Ebe ọdịda anyanwụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ebe ọdịda anyanwụ
Geicher na odida okooko osisi
Iji nye ihe omuma ka o buru ahihia, mgbe ufodu a na eji osisi di iche iche na agba ohia - nke a bu geyhera, nke, n'ihi nke a, natara oke nkesa na nhazi uwa. Osisi ahụ si na North America bịa na anyị, n'ihi mgbalị nke ndị na-azụ atụrụ, natara ọkwa na-egbukepụ egbukepụ na ihe ịga nke ọma na nkwụsị anyị.
Na-eto eto heliotrope
Otu n'ime osisi ndị nwere ike icho akwa akwa ifuru gị bụ heliotrope. Ọmarịcha ya na okooko na-egbukepụ egbukepụ, na-esi ísì ụtọ. Akụkụ pụrụ iche nke heliotrope bụ ikike ịgbanwuo isi okooko osisi n'azụ ụda anyanwụ. N'ihi ya, aha osisi, nke Grik pụtara "ịgbanwu anyanwụ."
Ndị na-agaghị amasị chamomile, ọ siri ike ịchọta. A na-ewere okooko osisi mara mma a ihe nnọchianya nke ịhụnanya. Ụmụ agbọghọ ga-ekwenye na nke a: otu ọ bụla ma ọ dịkarịa ala mgbe ọ na-egwu egwuregwu ahụ "na-enweghị mmasị", na-agba ya ụra. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ọrụ ebube a n'ubi ifuru gị, maka mmalite, ọ ga-abara gị uru ịchọta na a na-akpọ chamomile ubi ubi, na mgbe ahụ, anyị ga-ekwu banyere ịgha mkpụrụ na ilekọta ya na mbara ala.